Bnyịnya ígwè ọ ga-akwụsịrịrị ọkụ ha na-akwụsị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Na-agba ịnyịnya ígwè ga-akwụsị na akara nkwụsị - otu esi edozi
Na-agba ịnyịnya ígwè ga-akwụsị na akara nkwụsị - otu esi edozi
Bnyịnya ígwè ọ ga-akwụsịrịrị ọkụ ha na-akwụsị?
Ndị na-agba ịnyịnya ígwèGa-agbaso Usoro Ugbo ala
N'ihi yakwụsị na nkwụsịihe ịrịba ama na-acha uhie uhieọkụdị nnọọ ka ụgbọ ala ndị ọzọ niile (CVC 21200).
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbakasị ahụ ugbu a. Echere m, ọ bụghị naanị uwe na-atọ ụtọ ma ọ bụ ụzọ ụgbọ ịnyịnya ígwè, ọ dị ka ha na-eche na ha karịrị iwu mgbe ha na-aga n'okporo ụzọ, nwee ohere maka obi nkoropụ mgbe ha na-ebili, ọbụnadị eme m ka m gafere ọkụ ọkụ na-awụlikwa elu, Echere m na ọ dị oke egwu, ọ bụghị ya, ọtụtụ ndị chere na ọ bụ ya na ndị mgbasa ozi kwenyere n'ezie na enwere ndị ọgba tum tum na-enupụrụ iwu okporo ụzọ isi, na-agbaze n'okporo ụzọ ma ghara iji okpu agha na ekwentị ha, yabụ enwere ndị ọgba tum tum ejighi n'aka mkpuchi ha nwere ike ịdaba n'ime ụgbọ ala gị ha nwere ike ịdaba n'ime gị. Achọpụtawo m ịnyịnya ígwè na ị na-na-esiwanye ike ike karịrị afọ ndị ziri ezi, na ha bụ kpam kpam-ejighị n'aka.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eche n'ezie na ha karịrị iwu ma ọ dị ihe ọ bụla, yabụ ka anyị bido site na isi mgbe anyị na-ekwu maka ndị na-agba ịnyịnya, gịnị ka anyị bu n'uche na ikike ahụ? nke a ma ọ bụ ọbụlagodi na m na-ekwu na ụfọdụ mmadụ dị ka stereotype mana onweghị onye na-agba ígwè, enwere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ma a na-ahụ ha ka ac yklist bụ akụkụ nke stereotype nsogbu nke ndị na-agba ịnyịnya igwe, A naghị ahụ gị ka onye na-emegbu mmadụ ma ọ bụ onye a zụrụ azụ, ma enwere nkwenye dị iche iche nke ịbụ onye na-agba ịnyịnya, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eji ụzọ ụgbọ njem ndị ọzọ, yabụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè anaghị adị iche na ndị ọzọ yana ebe Statistics dị oke oke. na ndị mmadụ na-emebi iwu ọtụtụ mgbe na igwe kwụ otu ebe karịa oge ọ bụla ọzọ. Ọtụtụ n'ime ndị na-agba ịnyịnya ígwè kwuru na ha mere nke a n'otu akụkụ iji mee ka nchekwa nke ndị na-ejikarị ọkụ ọkụ ọkụ n'ihi na ha na-atụ egwu, ọ bụrụ na ihe mere ha na mbụ. enwere ike inwe ezigbo njikọ na ụgbọ nke na-anwa inweta ha might nwekwara ike ịnọ n'okporo ụzọ maka nke a, mana ọ kachasị nchekwa na ọ bụ nchekwa onwe ya Ya mere ee, ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-emebi iwu mana ọbụlagodi na ha mere ya dị ize ndụ. Mmetụta nke omume a nke ndị mmadụ na-akwa bụ enweghị isi ma ọ bụrụ na ịlele ọnụọgụ ị na-ele anya, ezigbo ihe egwu nke ị kwenyere na ọ dị ize ndụ nye mmadụ niile nọ na UK ihe dịka mmadụ 1,700 kwa afọ m na-egbu n'okporo ámá na otu ọtụtụ n'ime ndị ahụ na-enweta site na igwe kwụ otu ebe na-adịkarị n'etiti efu na abụọ ha abụghị ndị na-ewu onwe ha dị ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè n'ihi na nsogbu ị nwere nke ị nwere na-akpachapụ anya ọbụlagodi mgbe ha nọ n'ime ya na nke ahụ na-ewe iwe na-abụghị ihe ị na-enweta n'ụgbọala n'ihi ndị n'ụgbọ ala nwere eriri oche, akpa ikuku, ngịga kachasị mma, nwee mmetụta dị mma nke na ha nwere ike ịkparị akụrụngwa gbasara ụdị mpụ ndị nwere ike ịbụ na ha na-egbu ndị mmadụ ma ọ bụ ndị isi agwa bụ 13 afọ na ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ echere m na m nyere n'efu gafere ọkụ na-acha uhie uhie na-agbapụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na otu n'ime ha agaraghị enwe ike ịchụpụ ha niile, nke pụtara n'ikpeazụ na ihe a niile pụtara imebi iwu ịgba ịnyịnya ígwè dị mma m ga-asị mba, ọ dị enweghị ike iwe, ọ nwere ike? nwere ike na-atụ ụjọ kwa, mana ha agaghị enwe ike iyi ndị ọzọ egwu dị egwu n'ihi na ọ bụ ihe na-adịghị njọ, yabụ na ọ bụghị mmadụ niile na-ekwu maka ịgba ịnyịnya ígwè dị egwu, ọ nwere ike bụrụ na ndị mmadụ na igwe kwụ otu ebe na-akpọte ha ma ọ bụ na ọ dị ntakịrị karịa doro anya ma na ị ga-bụchaghị achọpụta ọkwọ ụgbọala na-eme 30 na 2001 na ekwentị n'azụ wheel yepdu maara na akụkụ a ga-abịa ihe banyere ndị ọkwọ ụgbọala anyị nwere ike icheta nwekwara ike ịbụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè mgbe ha nọ n'ụgbọala ha mebiri iwu ahụ ma ọ bụrụ na ha emee ọ nwere ike ịdị ize ndụ taa, mmadụ ise ga-anwụ n'okporo ụzọ anyị na 63 ga-ata ahụhụ ndụ na-agbanwe mmerụ ahụ na n'ọtụtụ oge mgbe ndị ọkwọ ụgbọala na-akpata nsogbu ndị a na mmejọ ahụ kpatara ọgba aghara ndị ahụ Yourdị ekwentị gị na-adọpụ uche ọ nwere ike ibu ihe kpatara nnukwu ego nke nsogbu niile ugbu a bụ ihe anyị na - ele anya na njedebe Ọsọ ọsọ abụghị naanị oke ị hụrụ na ọ bụ ebumnuche iji mezuo omume ndị ọzọ ọ na - a drinksụkarị ị drivingụ ọgwụ ọjọọ na enweghị nsogbu. ately ị maara na mgbe ị dara, ị maara na ị drinkingụ ụgbọ ala na-arị elu Car na ọsọ nke 30 mph, o nwere otu ume, otu ikike mbibi dị ka obere ihe mgbawa ị zụtara na ọ bụ ya mere anyị ji dị ka ọha mmadụ gbalịsie ike ịbanye na ndị mmadụ mgbe ị na-anya ụgbọ ala a Ọ bụrụ na ị ga-ewere ya n'ụzọ ahụ, buru n'uche na nke a bụ ndị ụkwụ ụkwụ 448 gburu n'okporo ụzọ UK na 2016 chere na mgbasa ozi bụ nnukwu akụkụ n'ihi na mgbe anyị nụrụ banyere ihe mere ebe enwere nsogbu nke onye na-agba ígwè bụ nnukwu ihe, ọ bụ ihe na - adịghị adịkarị Ọ bụ nnukwu isiokwu Ọ bụ ihe niile gbasara akwụkwọ niile Ọ bụ akụkọ niile na redio na onye ọ bụla maara na onye na - agba ịnyịnya ígwè mere ihe na - adịghị mma na ọ bụ ọdachi mgbe nke ahụ mere, mana dị mwute ikwu na ọtụtụ ndị nwụrụ n'okporo ụzọ anyị kwa ụbọchị n'ihi omume na akpachapụghị anya nke onye n'azụ ụkwụ nke a ụgbọala na banyere ya dị nnọọ agaghị na-akọ na e nwere ọtụtụ n'ime ndị a na afọ iri gara aga ma ọ bụ otú Ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ gburu ma ọ bụ merụrụ ahụ nke ukwuu na U Roadszọ K fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara, mana imirikiti nke uru nchekwa ahụ enweela mmetụta nke ndị mmadụ nọ n'ụgbọala na ndị ọgba tum tum bụ ndị fọrọ nke nta ka ha bụrụ ọtụtụ ihe egwu.
Ọ bụrụ n'ezie na anyị chọrọ ime ka okporo ụzọ anyị dị nchebe, anyị ga-agbanwe mkparịta ụka anyị na mgbasa ozi ka anyị ghara ịtụkwasị ịnyịnya ígwè na ụzọ ịnya ụgbọ ala, ọ bụghị n'ihi na ndị ọkwọ ụgbọala bụ nnukwu ụmụ okorobịa, ọ bụ naanị echiche nke gụnyere akụkọ ifo na ụgha enyerela aka n'ezie ịgwọ ọrịa. uche na usoro oha na eze ka m chee na anyi kwesiri ikwu okwu n’onu mmadu, were obere ihe ma kwanyere ndi mmadu ugwu ma anyi aghaghi iweghachite azu n’ime ndu anyi niile ma ghota na n’ime otutu mmadu, obu ndi mmadu ndị kwesịrị ịgagharị ma nwekwuo nkwanye ùgwù maka ibe ha ekele maka ikiri biko amasị na ịdenye aha hapụ ihe ị kwuru n'okpuru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe anyị na-eme, pịa ebe a maka ewu kwa nkwado
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè anaghị akwụsị na akara nkwụsị?
Ebe uzo gafere bu ebe ichoro iwepu oge di nkpa. Otutu,ndị na-agba ígwèga-akwụsịlata zuru ezu na aakara akaka ịlele ọbịbịa nke ọmaokporo ụzọ, na ucheKwụsịọ bụrụ na onye ọ bụla na-abịa.
Kedu ihe kpatara na ndị na-agba ịnyịnya ígwè anaghị akwụsị na ọkụ uhie?
Na-atụfu oke ọkụ mgbe ịKwụsịma bido igwe kwụ otu ebe. Ọ dị mfe idebe igwe kwụ otu ebe ka ọ dị karịa ịmalite ya site na ndị nwụrụ anwụKwụsị. Nke a bụ ihe kpatara otutundị na-agba ígwèagbasaghị ịgwọKwụsịihe ịrịba ama /acha uhie uhiedị ka a ga-asị na ha na-amịpụta ihe ịrịba ama.
Ọ bụ iwu na ndị megidere ịnyịnya ígwè ịga uhie ọkụ?
.B.uhie okporo ụzọ ọkụmetụtara ndị ọrụ okporo ụzọ niile.Ndị na-agba ịnyịnya ígwèagaghị agafe nkwụsị nkwụsị ma ọ bụrụ naọkụ ọkụdịnet. Jiri akara nkwụsị dị iche makandị na-agba ígwèmgbe ọ bara uru.Eprel 6 2017
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enwe ikike nke ụzọ mgbe niile?
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè, dịka ndị ọkwọ ụgbọ ala,kwesịrịekwula mgbe na anke ziri ezima ọ bụ chee na ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ 'ga-alaghachi' ma mee ihe kwekọrọ na ya. N'ezie, echiche a bu ndị ọkwọ ụgbọala nandị na-agba ígwèga na-akpaso ibe ha àgwà ọma mgbe ha na-emekọrịta ihe n'ụzọ.
Iwu okporo ụzọ ọ metụtara ndị ọgba tum tum?
Naiwu okporo ụzọnọrọ otu otu ọbụlagodi na ị na-agba ịnyịnya aigwe. Mgbe ị na-atụgharị aka ekpe ma ọ bụ aka nri, na-ele anya n’azụ gị maka nkwụsịtụokporo ụzọ, wee gosipụta tupu ịmee uzo.Febbọchị 6 2016
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè ga-akwụsị na ọkụ ọkụ UK?
Ihe iwu kwuruịgba ígwè. N'okpuru okporo ụzọ okporo ụzọ 1988 ndị ọrụ okporo ụzọ niile, gụnyerendị na-agba ígwè, agaghị agafeKwụsịkwụ n'ahịrị mgbe okporo ụzọọkụdịnet. Ọ bụrụ n ’aka ndị uwe ojii hụrụ gị, ọ ga-abụ na ha ga-enye gị ndụmọdụ ma ọ bụ ego dikwa of 30.Ọgọst 8 2017
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na onye na - agba ịnyịnya ígwè gafere ọkụ na - acha uhie uhie?
Oke ugwo makaacha uhie uhieịwụli elu bụ £ 1,000 nke ọma na akara ntaramahụhụ isii kwadoro na akwụkwọ ikike ọkwọ ụgbọ ala agbanyeghị, n'ọtụtụ oge, ọkwọ ụgbọ ala ga-enweta Amụma Ahụhụ Kwesịrị Ekwesị (On-the-Spot Fine) nke £ 30 ebe ọ ga-abụ na a ga-enyefe ihe kachasịọ bụrụa na-ese okwu amamikpe ahụ na-ekpe ikpe ma kpụga ya n'ụlọ ikpe.
Kedu ihe kpatara na ndị ọgba tum tum enweghị ike ịgba ọsọ?
Cygba ígwèna - ewuli mọzụlụ ị na - ejighina-agba ọsọ, si otú a na-egbochi mgbochi na mmerụ ahụ, nana-agba ọsọna-ewuli mọzụlụ anaghị eji yaịgba ígwè, ya bụ eriri ụkwụ.June 1. 2007 afọ
tandem igwe kwụ otu ebe
Kwesiri ịga ije igwe kwụ otu ebe gị n'okporo ụzọ?
Na-eje ije gị igwe kwụ otu eben’okporo ụzọ ụkwụ na-agafe agafe. Nke a na-enyegịụzọ ziri ezi dịka onye ji ụkwụ aga. Ọ bụrụgịnọkwasiigwe kwụ otu ebe gafeeụzọ na-agafe agafe,gịnwere ike ọ gaghị enwe ikike n'ụzọ nke iwu.
Onye nwere ikike ije ụkwụ ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè?
Meendị na-agafe agafe nwere ikike nke ụzọ? Dị ka ọkàikpe Mauger kọwara na ya summing, ọbụna ebe a ọkwọ ụgbọala ma ọ bụịnyịnya ígwè nwere ikikenke agha n'okporo ụzọ 'ndị ji ụkwụ agandị guzosiri ike n'okporo ụzọnwere ụzọ ziri ezi'. Iwu nke 170 nke Highway Code na-ekwu na ọ bụrụ na aonye ji ụkwụ aga'malitere ịgafe' okporo ụzọ, hanwere ụzọ ziri ezi.Ọnwa Isii 19. Dec 2019
Ọ bụ iwu maka igwe kwụ otu ebe ka ọ kwụsị na akara nkwụsị?
Ndị na-eme iwu na-ekwu na iwu ọhụrụ ahụ dị mma maka ndị mmadụ na ịnyịnya ígwè. Washington Bikes, otu nzukọ na-ahụ maka ịgba ịnyịnya ígwè na steeti, wepụtara nkwupụta na Septemba 28 na iwu ahụ ga-ahapụ ndị mmadụ na ịnyịnya ígwè ka ha na-emeso akara ngosi nkwụsị dị ka akara ngosi mkpụrụ. Iwu 'Nchedo Kwụsị' ga-eme ka iwu ka ndị na-agba igwe gbafee n'okporo ụzọ ma ọ bụrụ na ụsọ oké osimiri ahụ dị ọcha.
You ga-akwụsịrịrị akara nkwụsị niile?
A: Onye na - agụ akwụkwọ anyị kwụsịrị na ihe ịrịba ama nkwụsị abụọ ma mee ihe ziri ezi. Onye na-agba ịnyịnya ígwè bụ́ onye nyawara akara akara nkwụsị dara iwu ahụ. Ndị na-agba ịnyịnya ígwè aghaghị irube isi n'iwu na-achịkwa okporo ụzọ, nke ahụ na-agụnyekwa ịkwụsị ihe ịrịba ama nkwụsị niile na ọkụ ọkụ na-acha ọbara ọbara, n'agbanyeghị ma ụgbọala ọzọ ọ̀ dị ebe ụzọ ahụ dị.
Kedu mgbe ndị na-agba igwe anaghị akwụsị na ọkụ uhie?
Otú ọ dị, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, nnyocha ọhụrụ sitere na Mahadum DePaul, dlọ Ọrụ Chaddick maka Ọganihu Obodo, na-egosi na ndị na-agba ịnyịnya ígwè anaghị akwụsị na akara nkwụsị ma ọ bụ ọkụ uhie mgbe enweghị okporo ụzọ na iwu ndị a na-adịghị agbanye